Kinh nghiệm chọn mua dàn karaoke gia đình hay nhất hiện nay | Muasalebang - Muasalebang
Điện Thoại 0 lượt xem 21/06/2022
Đang Đọc: Kinh nghiệm chọn mua dàn karaoke gia đình hay nhất hiện nay | Muasalebang in Muasalebang
Uhlelo lwamanje lwe-karaoke oludumile luqukethe izingxenye ezi-4: izipikha, izikhulisamazwi, abafundi, nemakrofoni. Isistimu entsha ye-karaoke nayo inezingxenye ezanele zezipikha, abafundi, namakrofoni, kodwa ingena esikhundleni se-mixer ezinikele (i-mixer) esikhundleni se-amp. Ukukhetha uhlelo lwe-karaoke lomndeni olufanele isabelomali sakho kuncike ezintweni eziningi.
>> Phakamisa amasethi angu-3 e-Karaoke aphezulu ongaphuthelwa kuleli holide le-Tet
1 Khetha ukuthenga uhlelo lwe-karaoke ngaluphi uhlobo?
2 Ithini intengo yamanje yekaraoke?
2.1 I-karaoke eshibhile
2.2 I-karaoke yebanga eliphakathi
2.3 Uhlelo lwe-karaoke olusezingeni eliphezulu.
3 Ungakhetha kanjani ukuthenga uhlelo lwe-karaoke lomndeni
3.1 Jabulela ukuthenga izipikha ze-karaoke
3.2 Zizwa ngokuthenga izikhulisa-zwi ze-karaoke
3.3 Isipiliyoni sokuthenga ikhanda eliculayo le-karaoke yasekhaya
3.4 Jabulela ukuthenga imakrofoni yekaraoke
3.5 Isipiliyoni sokuthenga i-mixer ezinikele (i-mixer)
4 Phakamisa umshini ofanele
Khetha ukuthenga uhlelo lwe-karaoke ngaluphi uhlobo?
Kunezindlela ezimbili zokuxubana kwesistimu yomsindo wasekhaya namuhla: ukuvumelanisa kanye nokuzixuba ngokwakho.
Ifomu elizihlanganisele lifanele labo abangenalo ulwazi emkhakheni wemishini yomsindo noma abafuna ukuthenga isethi ephelele yemishini evumelanisiwe ehlome ngokugcwele izingxenye zayo.
Imodi yokuzibhanqa izokuvumela ukuthi ukwazi ukukhetha uhlobo lwedivayisi yokumatanisa ekhethekile ngokuya ngokuthanda kwakho. Kodwa ngaphansi kombandela wokuthi unolwazi oluncane ngomkhakha wemishini yokulalelwayo. Lokhu kukusiza ukuthi ugweme izinkinga ezingalindelekile ngesikhathi sokumataniswa kwezingxenye ezingekho kumshini ofanayo.
Ithini intengo yamanje yekaraoke?
Intengo ingenye yezinto eziyisisekelo ezinquma ikhwalithi yangempela yomkhiqizo. Intengo ihambisana nekhwalithi, ngokuvamile imikhiqizo enenani eliphezulu izohambisana nekhwalithi enhle ngokubuyisela imikhiqizo eshibhile enekhwalithi ephansi futhi i-karaoke nayo ayifani. Isethi enenani eliphezulu izoba nekhwalithi ehlukile kunamasethi e-karaoke ashibhile.
Amanani e-karaoke manje ahluke kakhulu futhi ahlukaniswe izingxenye ezi-3 eziyinhloko: amasistimu e-karaoke angabizi kakhulu, amasistimu e-karaoke amaphakathi nebanga eliphezulu kanye nezinhlelo ze-karaoke ezisezingeni eliphezulu. Esigabeni ngasinye, amasethi esiteji azoba nezici zawo, ikakhulukazi:
I-karaoke eshibhile izoba yisixazululo esilunge kakhulu kulabo abathanda ukucula kodwa abangacebile kakhulu. Ngesistimu ye-karaoke eshibhile, kuzophinde kube khona uhla olugcwele lwemishini ye-karaoke, izikhulumi ze-karaoke, izikhulisamazwi ze-karaoke namakrofoni, lawa madivayisi alahlwa kakhulu noma akhiwe noma acutshunguliwe, izimpahla zokulingisa,… Amanani asukela ku-10 kuya ku-20 million, amasethi e-karaoke ashibhile asetshenziswa kakhulu emindenini. Ngakho nobabili ningaba nesethi yekaraoke futhi nilondoloze ukutshalwa kwezimali okuhle kakhulu.
Kodwa-ke, uma usebenzisa uhlelo lwe-karaoke olushibhile, kuzodingeka wamukele into eyodwa ukuthi umsindo ngeke ube sezingeni eliphezulu futhi izinkinga ezingalindelekile zihlale zifihliwe futhi zingenzeka uma ungazisebenzisi kahle.
I-karaoke yebanga eliphakathi
I-karaoke ephakathi nendawo enamanani avela ku-20 kuya ku-40 million, lokhu kuyisinqumo sabantu abaningi uma kunesidingo sokuhlomisa uhlelo lwe-karaoke. Imishini efakwe kusethi iphinde ihluke kakhulu, ngaphezu kwemishini eyisisekelo, ungakwazi ukwengeza i-subwoofer noma esikhundleni se-amplifier nge-digital reverb kanye ne-booster yamandla ukuze uthuthukise ikhwalithi yesistimu ye-karaoke.
Ukusebenzisa isistimu ye-karaoke yebanga eliphakathi, ikhwalithi yomsindo izokwanelisa ngokuqinisekile, ukuxuba isignali phakathi kwamadivayisi kusebenza kakhulu, ngaleyo ndlela kunikeze imisindo engcono nekhangayo. Umculi ngeke akhathale, kodwa izwi lisazodluliselwa ngendlela engcono kakhulu.
Ngaphezu kwalokho, uma ufakwe uhlelo lwe-karaoke oluphakathi nendawo, ungaqiniseka ngekhwalithi yemishini. Ngoba uma intengo inyusiwe, amadivayisi nawo azoba nekhwalithi engcono.
Uhlelo lwe-karaoke olusezingeni eliphezulu.
Ngokuvamile, amasethi e-karaoke aphezulu ngokuvamile abiza ngaphezu kwezigidi ezingu-40 futhi ngale ntengo ungakwazi ukukhetha ngokukhululekile imishini yomsindo efakwe kusethi. Lezo zizoba amadivaysi angcono kakhulu avela kubakhiqizi abadumile futhi ikakhulukazi ikhwalithi yomsindo iyoba engcono kakhulu.
Nokho, ukuba ngumnikazi wamasethi e-karaoke asezingeni eliphezulu akulula. Ngoba ukwenza lokho, udinga ulwazi oluzwakalayo kanye nekhono elihle lokulalela ukuze ukwazi ukuxhaphaza zonke izinto ezinhle ezilethwa amasethi e-karaoke aphezulu.
>> Idingani uhlelo lwe-karaoke “okujwayelekile ngaphandle kokulungiswa”?
Ungakhetha kanjani ukuthenga uhlelo lwe-karaoke lomndeni
Jabulela ukuthenga izipikha ze-karaoke
Izipikha ziyingxenye ebaluleke kakhulu yesistimu ye-karaoke. Isipikha sekhwalithi sizoletha umsindo ocacile, onemininingwane eminingi, ibhesi evumelanayo, ikhwalithi yomsindo ngaphandle kokuhlanekezela noma ukuhlanekezela uma kuphakanyiswa.
Ihlolwa kanjani ikhwalithi yomsindo wesipikha: hlola izinhlobo ezi-3 zomculo ngamabhendi ama-3 ahlukene wefrikhwensi yomsindo: 1 bolero, 1 obukhoma no-1 womculo wezinsimbi. Uma isipika sikhiqiza ikhwalithi yomsindo ebushelelezi kuwo wonke amabhendi angu-3, ​​leso sipikha siphelele ngempela.
Ingxenye ebaluleke ngokulinganayo umthamo wesikhulumi. Udinga kuphela ileveli yevolumu esuka ku-70% ukuze ubuye, lapho-ke leso sipikha sihlangabezane nezidingo zomsindo womsindo womdlali kahle. Gwema ukuthenga izipikha ezinomthamo omncane, kufanele uguqule ivolumu ibe ngu-100% ukuze uhlangabezane nezidingo zokusetshenziswa. Ngoba lokhu kuzokwenza isikhulumi sibe namahloni futhi silimale ngokushesha.
Enye inothi, udinga ukuhlukanisa phakathi kwezipikha zokulalela umculo nezipikha zekaraoke. Abanye abasebenzisi bavame ukusebenzisa izipikha zomculo ukucula i-karaoke ukuze wonge imali, lokhu kuzonciphisa ikhwalithi yomsindo, uma isetshenziswe kakhulu, kuzobangela ukushisa kwesipika.
Ungakhetha izipikha ngokususelwe kusayizi wegumbi ngokuya ngeziphakamiso ezingezansi:
Indawo yegumbi kusuka ku-10 – 15m2: umthamo ofanele ngu-30 – 45W
Indawo yegumbi kusuka ku-15 – 25m2: umthamo ofanele ngu-45 – 75W
Indawo yegumbi kusuka ku-25 – 35m2: umthamo ofanele ngu-75 – 105W
Indawo yegumbi kusuka ku-35 – 45m2: umthamo ofanele ngu-105 – 135W
Indawo yegumbi kusuka ku-45 – 55m2: umthamo ofanele ngu-135W – 165W
Phakamisa eminye imikhiqizo ethengiswa kakhulu yesipikha sekaraoke:
– I-JAMO S628 HCS I-Apple Emnyama ISETHI ISIKHULUMI
– TORIMY RT-891 Somlomo
Zizwa ngokuthenga izikhulisa-zwi ze-karaoke
Ukuze ukhethe i-amp ekahle, uthembele kuzipikha ezinezici ezi-2 ezibalulekile:
Xem Thêm Hướng dẫn cách bỏ chặn Messenger trên điện thoại, máy tính | Muasalebang
– I-amplifier impedance ingaphansi noma ilingana ne-impedance yesipika (i-impedance unit i-ohms).
– Amandla amaphakathi esipikha adinga ukuba ngaphansi kwengqikithi yamandla e-amp (amandla e-amp anconyiwe aphindwe kabili amandla ayisilinganiso esipikha).
Isibonelo: Uma ukhetha ipheya yezipikha ezinamandla ayisilinganiso angu-200W/isipikha, esinokuphazamiseka okungu-8 ohms. Udinga i-amp enamandla angaphezu kuka-200W/isiteshi kanye ne-impedance engu-4 – 8 ohms. Ukusuka lapho, singakhetha i-amplifier enamandla angu-300W ngesiteshi ngasinye, i-impedance yokuphumayo ingu-4 ohms.
Ngaphandle kwalokho, i-amplifier enhle yileyo engenawo umsindo ohlabayo lapho umsindo uzwakala kakhulu, futhi awukho umsindo wekhwela lapho ulungisa ivolumu. Abantu abaningi bakholelwa ngephutha ukuthi amandla amakhulu e-amp, iba ngcono ikhwalithi yomsindo. Eqinisweni, i-amp idlala kuphela indima yokusekela umsindo ongcono, okhangayo. Idivayisi eyinhloko yokukhipha umsindo yisipika.
Lapho uthenga i-amp, udinga ukuqaphela ukuthi ungadideki. I-amp ngayinye ngokuvamile inezilinganiso ezimbili zamandla. Leyo:
Amandla e-RMS: Amandla aphakathi nendawo ukuze i-amp isebenze ngokuzinza isikhathi eside.
Amandla e-PMPO: Ipharamitha ekhombisa amandla aphezulu esikhulisamandla atholwe ngesikhathi esifushane.
Phakamisa eminye imikhiqizo ye-amp ethengiswa kakhulu:
– I-DAH-100SE Isisetshenziswa Sokukhiqiza Umsindo Womkhiqizo
– Isihlelamsindo BA300, Brand BOSTON ACOUSTIC
Isipiliyoni sokuthenga ikhanda eliculayo le-karaoke yasekhaya
Umdlali we-Karaoke futhi uyingxenye ebaluleke ngokulinganayo yesistimu ye-karaoke. Umdlali we-karaoke wekhwalithi kufanele ahlangabezane nalezi zindlela ezilandelayo kahle: ukusekela izimbobo zokuxhuma eziningi ezifana nalezi: imbobo ye-LAN, imbobo ye-HDMI, imbobo ye-USB, … enesitolo esikhulu sedatha yengoma, ikhono lokudlulisa idatha Ngokushesha, okubukhali nokushelelayo komsindo nevidiyo. isivinini sokubuyisa.
Ngaphezu kwalokho, abanye abadlali be-karaoke abasezingeni eliphezulu nabo bahlonyiswe ngezinsiza ezihlakaniphile, ezihlinzeka ngolwazi oluthokozisayo kubasebenzisi njengokuthi: ukukhetha izingoma ngesikrini sefoni, ukusekela ukudlalwa komculo ngembobo ye-USB, njll. Ukushaya ingoma okuzenzakalelayo, ukungqubuzana okuphumelelayo, anti-mlilo.
Phakamisa eminye imikhiqizo yekaraoke ethengiswa kakhulu:
– I-KARAOKE ARIRANG 3600HDMI (1TB)
– Umdlali weKaraoke PARAMAX LS3000
Jabulela ukuthenga imakrofoni yekaraoke
Lapho uthenga imakrofoni, udinga ukunaka ukuthi ukuzwela, ukuguquguquka kanye nekhono lokumunca izwi kuhle noma cha. Ngenxa yalokho, umculi ngeke kudingeke ahefuze, kodwa acule nje kancane, imakrofoni ikwazi ukubamba izwi ukuze idlulise umsindo. Ngaphandle kwalokho, ikhono lokuthwebula amasignali amahle ukusuka ebangeni elingaphezu kuka-15m futhi ube nezithiyo nalo lidinga ukunakwa uma uvamise ukuhamba kakhulu.
Ungavivinya kanjani ikhwalithi yomsindo wemibhobho ye-karaoke: ungahlola imakrofoni ngemisho emifushane embalwa efana; i-alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, … bese usondeza umbhobho ngokuqhubekayo bese uvala umlomo ukuze uhlole ukuzwela komsindo lapho ibanga lishintsha. Uma umsindo uhlala ucacile, ucacile, futhi unganqamuki, kusho ukuthi umbhobho wekaraoke ophelele.
Phakamisa eminye imikhiqizo yombhobho wekaraoke ethengiswa kakhulu:
– I-Micro Karaoke Ephathekayo Nesipika ICORE IC-M99
Xem Thêm Vivo Y91C | Giá rẻ, chính hãng, nhiều khuyến mãi | Muasalebang
– MICRO ZENBOS MZ-328
Isipiliyoni sokuthenga i-mixer ezinikele (i-mixer)
I-mixer ihlanganiswe nokukhulisa umsindo okunamandla nezici zokulungisa kahle ngokufakwa kalula, ukusetshenziswa kalula, kanye nenani elishibhile kune-amp. Ungabhekisela kwezinye izixube ezidumile namuhla: i-arguar KM 202, AM K890, AAP Audio-K1000 noma i-JBL KX200,… Nokho, isihlanganisi kufanele size nefomethi yamandla neyokukhiphayo. digital esikhundleni se-analog njenge-amp.
Phakamisa amamodeli enhlanganisela athengiswa kakhulu:
– I-Mixer PARAMAX DX-2500 AIR
>> Ungacula kanjani i-karaoke ku-smart TV?
Phakamisa umshini ofanele
Izindleko eziphelele: 17,587,000 VND
Umshini wekaraoke we-ARIRANG Smart K+ (3TB)
Intengo yesithenjwa: 3,999,000 VND
Isidlali se-Arirang Smart K+ Karaoke (3TB) sifakwe i-8-core processor enamandla (Octa Core 2 GHz) kanye nephrosesa yezithombe ze-GPU ehlukile kanye ne-RAM engu-2GB, isistimu yokusebenza ye-Android 4.4 yabasebenzisi ukuze bajabulele umculo wekhwalithi ephezulu noma imuvi ngokushesha. Umkhiqizo ungalawulwa ngohlelo lokusebenza ku-smartphone, ithebhulethi (i-WIFI Direct), ikhibhodi, igundane, isilawuli kude.
Isikhulisi se-DALTON DH-7000XB
Intengo yesithenjwa: VND 4,599,000
Idizayini ewubukhazikhazi, amaknobhu okulawula ahlelwa ngokwesayensi, okusiza abasebenzisi ukusebenzisa i-amp kalula kakhulu. 20Hz-25KHz impendulo yefrikhwensi ye-bass ecacile, ecacile, emaphakathi, ehamba ngezinyawo, ekwazi ukuxhuma okungenantambo nge-bluetooth namadivayisi aphathwayo okudlala umculo njengamaselula ahlakaniphile noma amathebulethi angempela .
>> Zizwa ngokukhetha ukuthenga i-karaoke yomndeni ehamba phambili namuhla
Imakrofoni PARAMAX PRO-8000
Intengo yesithenjwa: 1,499,000 VND
I-Micro Paramax Pro 8000 inomklamo wesimanje, ohlanganisa izici eziningi ezenza umsindo usezingeni, ucace futhi ukhanye ukuze usize ukuletha umuzwa omuhle wekaraoke.Umkhiqizo usebenza ngamabhethri, usebenzisa amabhethri angu-1.5V AA, impilo ende Ibhethri eliphezulu, isikhathi eside sokusebenzisa, ngakho-ke uzokhululeka ukucula i-karaoke ngaphandle kokwesaba ukuphelelwa ibhethri ngenkathi usebenzisa, ulahlekelwe isithakazelo ekuculeni. Ukusebenza kwemakrofoni okuphezulu ebangeni elibanzi elingafika ku-60m². Ngaphansi kokusekelwa kobuchwepheshe be-infrared wave obuthuthukisiwe, ukuskena kwefrikhwensi kunembile futhi kuyashesha.
Imakrofoni engenantambo ye-Paramax isebenzisa i-UHF yefrikhwensi ephezulu kakhulu enamandla ngokwedlulele futhi ezinzile kanye namandla okudlulisa anebanga lika-630MHz ~ 680MHz. Ulayini wokudlulisa isignali awuthinteki neze ngokugqagqana kwefrikhwensi namanye amadivaysi e-multimedia njengamaza omsakazo, i-wifi, amafoni…
Ingemuva lesamukeli se-Micro Paramax pro 8000 sihlanganisa izimbobo zokuxhuma, izimbobo zokufaka amandla, nama-antenna nhlangothi zombili, ezisekela ukwamukelwa okungcono ezindaweni ezinkulu..
Isipikha se-BOSTON AUDIO BA-452V
Intengo yesithenjwa: 7,490,000 VND
Isipikha se-BOSTON BA-452V siklanywe ngesitayela sesimanje kanye nesakudala sibonga umklamo waso wamapulangwe odonsa amehlo. Ukubukeka okuhlanzekile nokunesitayela, isikhulumi sazuza uzwelo olukhulu kubathengi lapho sisanda kwethulwa, sihlela kalula noma iyiphi indawo.
Ngaphezu kwalokho, i-Boston BA-452V iyakwazi ukukhiqiza kabusha imisindo ye-bass, ikuvumela ukuthi ujabulele amamuvi aphilayo noma umculo ngenxa ye-bass ejulile nebanzi kanye ne-treble, ikunikeza wena nomndeni wakho umuzwa ogcwele.
Lesi isiphakamiso esincane sokukusiza ukuthi ukhethe ukuthenga umshini we-karaoke wasekhaya. Ukukhetha isistimu ye-karaoke yekhwalithi, kufanele ubeke kuqala ekukhetheni okokusebenza ezinkampanini ezinedumela elihle elisatshalaliswa ama-ejenti amakhulu ukuze ube nesiqiniseko sekhwalithi, futhi ungesabi ukuthenga izimpahla zomgunyathi. , Ama-Counterfeiters. Ukuze uthole ulwazi oluthe xaxa kanye nezeluleko ezingcono ngeminye imikhiqizo eminingi yekhwalithi ngamanani athengekayo, ungaya esitolo esiseduze Isitolo esikhulu se-Cho Lon Electronics. Thola uhlelo lwesitolo lukazwelonke LAPHA.